Lioka 20 - Ny Baiboly
Lioka toko 20
Resy lahatra ny Farisiana - Ireo mpiasa tanimboaloboka ratsy fanahy - Ny fandoavan-ketra ho an'i Sezara - Ny hitsanganan'ny maty - Sady zanak'i Davida no tompony ny Kristy.
1Ary indray andro tamin'izany, nampianatra ny vahoaka tao an-tempoly izy ka nitory ny Evanjely, dia tonga ny lehiben'ny mpisorona sy mpanora-dalàna mbamin'ny loholona, 2ka nanao taminy hoe: Lazao anay: Inona moa no fahefana anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany? 3Ary namaly Jesoa ka nanao tamin'izy ireo hoe: Mba hanontany zavatra anankiray aminareo koa àry aho ka valio: 4Avy aiza moa ny batemin'i Joany, avy amin'Andriamanitra sa avy amin'ny olona? 5Dia niara-nisaina izy ireo nanao hoe: Raha izao mantsy no lazaintsika hoe, avy amin'Andriamanitra, dia hovaliany hoe: nahoana àry hianareo no tsy nino azy? 6Ary raha hataontsika hoe, avy amin'ny olona indray, dia hitora-bato antsika ny vahoaka, satria inoany ho mpaminany Joany. 7Koa namaly izy ireo, fa tsy fantany izay nihaviany. 8Dia hoy Jesoa taminy: Izaho koa tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao.
9Dia nilaza ity fanoharana ity tamin'ny vahoaka izy nanao hoe: Nisy lehilahy anankiray namboly tanimboaloboka ka nahofany tamin'ny mpiasa, dia lasa izy ka nitoetra ela tany an-tany hafa. 10Nony tonga ny taom-pahavokarana dia naniraka mpanompo anankiray tany amin'ny mpiasa izy, mba haka amin'ny vokatry ny tanimboalobony; nefa nokapohin'izy ireo sy nampodiny maina. 11Dia naniraka mpanompo anankiray hafa indray izy, fa nokapohin'ireo ihany koa sady notevatevainy sy nampodiny maina. 12Ary naniraka fanintelony izy, fa io koa sady nataony naratra no noroahiny. 13Ka hoy ny tompon'ny tanimboaloboka: Inona re no hataoko? ndeha hirahiko lahy ny zanako malalako, fa angamba hanaja azy izy ireo raha mahita azy. 14Kanjo nony nahita iny ny mpiasa dia nanao anakampo hoe: Ity ny mpandova ka ndeha hovonointsika, dia ho antsika ny lova. 15Dia noroahiny ho any ivelan'ny tanimboaloboka izy ka novonoiny. Inona àry no hataon'ny tompon-tanimboaloboka amin'izy ireo? 16Ho avy izy ka handringana ireo mpiasa ireo, ary ny tanimboaloboka dia hafindrany amin'olon-kafa. Nony nandre izany ry zareo teo, dia nanao hoe: Sanatria izany! 17Fa nibanjina azy ireo Jesoa ka nanao hoe: Inona àry ity voasoratra ity: Ny vato nolavin'ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro? 18Izay rehetra lavo amin'izany vato izany dia ho torotoro, ary izay hianjerany dia ho mongomongo. 19Dia notadiavin'ny lehiben'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna hosamborina teo no ho eo ihany izy, satria fantany fa izy ireo ihany no nanaovan'i Jesoa izany fanoharana izany; saingy ny tahony ny vahoaka no nampiato azy indray.
20Koa dia nataony andri-maso izy sy nanirahany mpitsikilo, izay nody ho marina, mba haningotra azy amin'ny teniny, hanolorany azy eo ampelatànan'ny governora. 21Ary toy izao no fanontanian'ireo olona ireo azy: Ry Mpampianatra ô, fantatray fa miteny sy mampianatra araka ny hitsiny hianao ka tsy mizaha tavan'olona, fa mampianatra ny làlan'Andriamanitra araka ny marina: 22mety va raha mandoa hetra ho an'i Sezara izahay sa tsia? 23Fa fantatr'i Jesoa ny hafetsen-dratsin'izy ireo, ka hoy izy taminy: Nahoana no maka fanahy ahy hianareo? 24Asehoy ahy ny vola denie. Sarin'iza sy anaran'iza ity? An'i Sezara, hoy iretsy. 25Dia hoy izy taminy: Aloavy ho an'i Sezara àry izay an'i Sezara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. 26Gaga foana ry zareo tamin'ny valin-teniny ka kepoka nangina terý, fa tsy nahita teny iray akory haniniany azy teo imason'ny vahoaka teo.
27Dia nanatona koa ny sasany tamin'ny Sadoseana izay mandà ny fitsanganan'ny maty, ka nanontany azy hoe: 28Ry Mpampianatra ô, Moizy nanome lalàna ho antsika hoe: Raha misy lehilahy manambady ka maty momba, dia aoka ny rahalahiny hampakatra ny vadiny mba hiteraka hamelo-maso ny rahalahiny. 29Koa nisy olona fito mirahalahy, ary nanambady ny zokiny, fa maty momba. 30Dia nanambady an-dravehivavy ny faharoa, fa maty momba koa. 31Nanaraka izany dia nanambady azy indray ny fahatelo, ary nanao toy izany avokoa izy fito mirahalahy, fa maty momba daholo. 32Farany, dia maty koa ravehivavy. 33Koa ho vadin'iza ravehivavy raha mby amin'ny fitsanganan'ny maty? fa efa samy nanambady azy avokoa izy fito lahy? 34Dia hoy Jesoa taminy: Ny zanak'izao fiainana izao no mampaka-bady sy avoaka hampakarina; 35fa izay efa hita ho mendrika hahazo ny fiainana ho avy sy ny fitsanganana amin'ny maty kosa, dia tsy mba mampaka-bady, na avoaka hampakarina, 36ary tsy mety maty intsony izy, fa tahaka ny anjely sady zanak'Andriamanitra, satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. 37Ary raha ny hoe hitsangana ny maty, dia zavatra efa nambaran'i Moizy teo amin'ilay nilazany ny Voaroy izany, fa tamin'io izy dia niantso ny Tompo hoe: Andriamanitr'i Abrahama sy Andriamanitr'Isaaka ary Andriamanitr'i Jakoba. 38Koa velona eo anatrehany izy rehetra ireo, satria tsy mba Andriamanitry ny maty izy, fa an'ny velona. 39Dia namaly ny sasany tamin'ny mpanora-dalàna ka nanao taminy hoe: Ry Mpampianatra ô, marina ny filazanao. 40Ary tsy nisy sahy nanontany azy intsony izy ireo.
41Dia hoy Jesoa taminy: Ahoana no iantsoana ny Kristy hoe zanak'i Davida, 42nefa Davida ihany no milaza ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe: Ny Tompo nilaza tamin'ny Tompoko hoe: Mipetraha eo an-tànako an-kavanana, 43ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? 44Antsoin'i Davida hoe Tompo izy, ka ahoana no maha-zanany azy?
45Mbola mihaino azy eo ny vahoaka rehetra dia hoy izy tamin'ny mpianany: 46Tandremo ny mpanora-dalàna, izay finaritra mitsangantsangana amin'ny akanjo rebareba, te-ho arahabaina eny amin'ny kianja, tia ny fipetrahana voalohany amin'ny fanasana, 47fa mifetsy ny fananan'ny mpitondratena amin'ny fivavahana lavareny ataony mba ho fieboana fotsiny, ka hohelohina mafimafy kokoa izy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0589 seconds